မိမိ မွေးနေ့ရောက်တိုင်း ဒီလိုလေး လုပ်ပါ .... - Myitter
မိမိ မွေးနေ့ရောက်တိုင်း ဒီလိုလေး လုပ်ပါ ….
February 14, 2020 Myitter ဗဟုသုတအစုံ 0
(၁၈) ရက် ကျင့် စဉ် ထူး
မိမိတို့မွေးနေ့မှစ၍ (၁၈)ရက်တိုင်တိုင် ကျင့်ဆောင်ရပါမည်။
မိမိတို့မွေးနေ့တွင်ကြေးဖလားနှင့်ဖြစ်စေ ငွေဖလားနှင့်ဖြစ်စေ ရေသန့်သန့်ထဲ့ပြီး သပြေပန်းများလှုဒါန်းထားပါ ။
ရေကိုနေ့စဉ် နေထွက်စဉ် အချိန်တ်ိုင်း လဲလှယ် ပေး ပါ ။ ပန်းညှိုးလျှင် အသစ်လှု ဒါန်းပေးပါ။
ရေလဲ ပန်းလဲ လှုဒါန်း ပြီး ချိန် တိုင်း အောက်ပါဂါထာအား (၉)ခေါက်ရွတ်ဖတ် ပါ ။
” ဣဒ္ဓိ မန္တောစယေဒေဝါ
ဝသန္တာ ဣဓသော သနေ
တေ ပိ အမှေ နုရက္ခန္တု
အရောဂေန သုခေန စ ”
ဣဓသောသနေ.. ခြောက် သွယ် ဘုန်း ရောင်ထိန်ထိန်ပြောင်သည့် အခေါင်ထွဋ္ဋ်ထားရှင်တော် ဘုရား ၏ သုံး ပါး သိက္ခာ ဤ သာသနာ၌
ဝသန္တာ… မှီ တင်း ညွတ်စကျင့် ကြံ နေထိုင်ကြ ကုန် သော
ဣဒ္ဓိမန္တော…. လွန်ကဲထူးခြားကြီးကျယ်ခမ်းနား သော တန် ခိုး ရှိ ကြ ကုန် သော
သန္တိ… ရှိကြကုန်၏ ။
တေပိ…. ထိုတန်ခိုးကြီးမြတ်သာသနာ ၌ နေထိုင်ကြကုန်သောနတ်များအပေါင်းတို့သည်
အာရောဂေနစ…. အနာရောဂါ ကင်း ရေး အားဖြင့်် လည်းကောင်း
သု ခေ န စ… ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာအေးကြည်သာ ၍ဗျာပါကင်းဝေးချမ်းသာရေးအားဖြင့် လည်းကောင်း
အနုရက္ခန္တု… ရင်သားပမာကရု့ဏာဖြင့် ရှုကာရွေး ကောက်ဘေးမရောက်အောင် အစဉ်စောင့် ရှောက် ကြ ပါ စေ ကုန် သတည်း ။ ဟု့ အနက် ပါ ရွတ် ဖတ် လျှင် ပို ၍ ကောင်း၏
ဤ သို့ကျင့် ဆောင်အားထုတ်ခြင်းဖြင့် တွေ့ကြုံဆုံဆည်းရသော ဘေးရန်အမျိူးမျိူး.. အနှောက်အယှက်အမျိူးမျိူးကာကွယ်တားဆီး ၍ မ ရ ရှိ သေး သောစည်းစိမ် ဥစ္စာ ရတနာများရရှိစေခြင်း စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှု့ရရှိစေခြင်း စသောအကျိူးကျေးဇူးရရှိစေသည်။
မိမိ မှေးနရေ့ောကျတိုငျး ဒီလိုလေး လုပျကွညျ့ပါ
မှေးနရေ့ောကျတျိုငျး ဒီလိုလေး လုပျကွညျ့ပါ
(၁၈) ရကျ ကငျြ့ စဉျ ထူး
မိမိတို့မှေးနမှေ့စ၍ (၁၈)ရကျတိုငျတိုငျ ကငျြ့ဆောငျရပါမညျ။ မိမိတို့မှေးနတှေ့ငျကွေးဖလားနှငျ့ဖွဈစေ ငှဖေလားနှငျ့ဖွဈစေ ရသေနျ့သနျ့ထဲ့ပွီး သပွပေနျးမြားလှုဒါနျးထားပါ ။
ရကေိုနစေ့ဉျ နထှေကျစဉျ အခြိနျတျိုငျး လဲလှယျ ပေး ပါ ။ ပနျးညှိုးလြှငျ အသဈျလှု ဒါနျးပေးပါ။ ရလေဲ ပနျးလဲ လှုဒါနျး ပွီး ခြိနျ တိုငျး အောကျပါဂါထာအား (၉)ခေါကျရှတျဖတျ ပါ ။
” ဣဒ်ဓိ မန်တောစယဒေဝေါ
ဝသန်တာ ဣဓသော သနေ
တေ ပိ အမှေ နုရက်ခန်တု
အရောဂနေ သုခနေ စ ”
ဣဓသောသနေ.. ခွောကျ သှယျ ဘုနျး ရောငျထိနျထိနျပွောငျသညျ့ အခေါငျထှဋ်ဋျထားရှငျတျော ဘုရား ၏ သုံး ပါး သိက်ခာ ဤ သာသနာ၌
ဝသန်တာ… မှီ တငျး ညှတျစကငျြ့ ကွံ နထေိုငျကွ ကုနျ သော
ဣဒ်ဓိမန်တော…. လှနျကဲထူးခွားကွီးကယျြခမျးနား သော တနျ ခိုး ရှိ ကွ ကုနျ သော
သန်တိ… ရှိကွကုနျ၏ ။
တပေိ…. ထိုတနျခိုးကွီးမွတျသာသနာ ၌ နထေိုငျကွကုနျသောနတျမြားအပေါငျးတို့သညျ
အာရောဂနေစ…. အနာရောဂါ ကငျး ရေး အားဖွငျ့ လညျးကောငျး
သု ခေ န စ… ကိုယျစိတျနှဈဖွာအေးကွညျသာ ၍ဗြာပါကငျးဝေးခမျြးသာရေးအားဖွငျ့ လညျးကောငျး
အနုရက်ခန်တု… ရငျသားပမာကရု့ဏာဖွငျ့ ရှုကာရှေး ကောကျဘေးမရောကျအောငျ အစဉျစောငျ့ ရှောကျ ကွ ပါ စေ ကုနျ သတညျး ။ ဟု့ အနကျ ပါ ရှတျ ဖတျ လြှငျ ပို ၍ ကောငျး၏
ဤ သို့ကငျြ့ ဆောငျအားထုတျခွငျးဖွငျ့ တှကွေုံ့ဆုံဆညျးရသော ဘေးရနျအမြိူးမြိူး.. အနှောကျအယှကျအမြိူးမြိူးကာကှယျတားဆီး ၍ မ ရ ရှိ သေး သောစညျးစိမျ ဥစ်စာ ရတနာမြားရရှိစခွေငျး စိတျဓာတျတညျငွိမျမှု့ရရှိစခွေငျး စသောအကြိူးကြေးဇူးရရှိစသေညျ။
ရှားရှားပါးပါး စေတီတော်မှာ ရောင်ခြည်တော် ကွန့်မြူးနေတဲ့ (ရုပ်သံ)